NUSOJ: Xukuumada Soomaaliya waxey warbaahinta u qeybisay mid ay u hanjabto iyo mid ay laaluushto – Somali Integration Tv
Maxamed Ibraahim Mocalimuu, Xoghayaha Guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ oo shir jaraa'id qabtay
Waxaa qoray Abdiaziz Hassan	 La dabacay Maanta Nov 26, 2018 0
Waxaa maanta Muqdisho shir jaraa’id ku qabtay Maxamed Ibraahim Mocalimuu, oo ah Xoghayaha Guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ.
Macalimow ayaa caddeeyay in wariyayaasha Soomaaliyeed ay halis weyn kujiraan, waxaana uu xusay in Dowladda iyo Al-shabaab ay hanjabaado joogto ah ku hayaan suxufiyiin badan oo dalka ka howlgasha.
Mocalimuu wuxuu ka digay in khatar weyn ay soo wajahday xorriyadda hadalka ee Soomaaliya, iyadoo maamulada dalka ay xabsiga u taxaabaan inta badan wariyeyaasha ka hadla arrimo liddi ku ah siyaasadda maamuladooda, oo qaar badana loo dilay, halka kuwa kale dhaawacyo halis ah loogu geestay.
Macalimoow“Xukuumadda RW Kheyrre Saxaafadda Waxay u qaybisay Qaar ay u hanjabto iyo kuwa ay Laaluushtay,waana xukuumaddii ugu qallafsaneyd ee Saxaafadda Soo marta”
Shirka jaraa’id ee Xoghayaha Guud ee NUSOJ Maxamed Ibraahim Mocalimuu ku qabtay Muqdisho, waxaa ka soo muuqday Hooyo Madiina Xaaji Cali oo wiilkeeda Nuur Ismaaciil Sheekh oo wariye ah uu u xiran yahay Maamulka Gobolka Banaadir.
Macalimow ayaa sheegay in dalka uu kujiro xaalad qalafsan isagoo intaa raaciyay in Dastuurka dalka uu xarrimayo in muwaadinku xirnaado wax ka badan 48 saac maxkamad la’aan!